Izizathu ezintlanu Sebenzisa Precision Laser Cutting Matshini
ngomphathi ku 21-05-13
Ukusika i-Laser luhlobo olungadibaniyo, olusekwe kwinkqubo yokuvelisa ubushushu edibanisa ubushushu obujolise kunye namandla ashushu, kwaye isebenza uxinzelelo ukunyibilika kunye nezinto zokutshiza kwiindlela ezimxinwa okanye ukusikwa. Xa kuthelekiswa neendlela ukusika yemveli, laser ukusika ineendlela ezininzi. Eyona njongo ...
Indlela ukukhetha ilungelo laser ityhubhu ahlabayo umatshini amandla?
Kubomi bemihla ngemihla, sihlala sibhekisa kwimibhobho yesinyithi ngokudibeneyo njengemibhobho yentsimbi, kodwa kwicandelo lokusika imibhobho, kufuneka sahlule ukuba ingaba isinyithi ngumbhobho wentsimbi yecarbon, umbhobho wesinyithi sesinyithi, umbhobho wesinyithi, insimbi yombhobho we-titanium okanye umbhobho wealuminium alloy . Kuba izinto ezahlukeneyo zahlukile ...
Zeziphi iimpazamo eziqhelekileyo kunye neendlela zonyango oomatshini laser ukusika?
Xa usebenzisa umatshini wokusika we-laser, iingxaki zihlala zivela ngenxa yexesha elide lokusebenzisa, indawo yokusebenza enothuli kunye nomgangatho ophantsi wabaqhubi. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho iingxaki eziqhelekileyo? Okokuqala, akukho nkqubo yesiqalo esiqhelekileyo: Ukusebenza kwesiphoso: amandla aphambili ...
Intsebenziswano eyonwabileyo kwi-IE expo China 2021
Ngo-Epreli 22, IE expo China 2021 igqibile e Shanghai, China. Sisekele ubudlelwane beshishini obuhle kunye nabathengi abavela kwihlabathi liphela ngokufanelekileyo. Sibonise ezinye iimveliso kwiFair, njengephepha lesinyithi sefayibha laser ukusika umatshini, umatshini wokusika umbhobho we-laser, ipleyiti ...
Zeziphi iindlela ezinokuthi zisetyenziswe namhlanje ukusika oomatshini be-laser be-laser?
Ukusika i-Laser kukutshintsha indawo yemela yemveli ngomthi ongabonakaliyo. Inempawu zokuchaneka okuphezulu, isantya esikhawulezayo sokukhawulela, esingaphelelanga kwiipateni zokusika, ukuseta okuzenzekelayo, ukugcina izinto, ukusika okugudileyo, kunye neendleko zokulungisa eziphantsi. Iya kuphuculwa ngokuthe ngcembe ...
Ukusetyenziswa kweFayibha Laser Ukusika Umatshini Izixhobo kwiZinto zeMizi-mveliso
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, oomatshini bokusika i-fiber laser baye basetyenziswa ngakumbi kwimakethi yezorhwebo. Ifayibha laser ukusika oomatshini ukusika ukuchaneka okuphezulu kunye nesantya esikhawulezayo, esinokuphucula ukusebenza kakuhle ngama-60% kwaye ugcine iindleko ezingaphezulu. Ke ngoko, bona ...
Indlela yokufumana okuninzi kwezixhobo zakho zokusika i-Laser
Ukusika i-laser yentsimbi kubandakanya izixhobo eziphambili ezifuna ukugcinwa rhoqo ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu. Emva kwayo yonke loo nto, ukusika i-laser konke malunga nokuchaneka, ke ukugcina oomatshini bakho bekwimeko ephezulu kubalulekile ekufumaneni iziphumo ozilindeleyo okanye abathengi bakho. Ngaphandle kwesondlo esifanelekileyo ...
Ukucanda iimpawu ifayibha laser kumatshini metal laser ukusika
Ngokusetyenziswa okunamandla komatshini wokusika we-laser yentsimbi, itekhnoloji yeshishini le-laser ihlala ihlaziywa kwaye ihlaziywa, ebonelela ngokuqhubekeka kunye nemveliso, igcina iindleko zabasebenzi, kwaye iphucula kakhulu imveliso kunye nengeniso ...
Laser ukusika umatshini brand uphawu lwasekhaya, njani umgangatho?
Ukuba ufuna umatshini wokusika we-metallaseryintoni olungileyo? Abathengi abaninzi ngaphambi kokukhetha umatshini wokusika we-laser baya kukhathalela malunga nesiphumo sophawu lwezixhobo zorhwebo, oko kukuthi, ukulingana kwegama lomntu ngaphandle, emva koko kudweliso lweemveliso zokusika i-laser zi-Wei Qian, sudde ...
Indlela yokulungisa nokuphucula isantya kunye nefuthe lomatshini wokusika we-laser?
Izixhobo zokusika i-Laser zingaphezulu, ezinye iinxalenye zexesha lokugcina zifutshane, umatshini wokusika i-laser uhlala ugcinwa. Indlela yokulungisa i-laser ukusika umatshini? Indlela yokulungisa iphutha ukuze uyinqumle ngokukhawuleza nangcono? Kufuneka uhlale ugcina, ukuze ugcine ulungile ...
Uyilo kunye nokusebenza komgaqo wefayibha laser ityhubhu yokusika umatshini
Ukulungiswa kwelaser kumatshini wokusika ityhubhu ye-laser kwenziwa ngemizobo yekhompyuter, elula nefanelekileyo ukuyiqhuba. Ngokumalunga nokuqhutywa kwemizobo, inokugqibezela ukuqhubekeka nokulungelelanisa nayiphi na imizobo. Kwaye banokuqonda ubukhulu becala, ukusebenza ngokukuko, h ...
Ukusetyenziswa kwefayibha laser ukusika umatshini ukusika izinto zobhedu
Ifayibha laser ukusika umatshini ingasetyenziswa ukusika ezahlukeneyo izinto. Ihlala iyindawo engaboniyo ekusikeni izinto zesinyithi. Itshintshile kule minyaka idlulileyo. Kwiminyaka yakutshanje, iye ngokuthe ngcembe lwaphuculwa isicelo ahlabayo ka -roduct yobhedu ...